2010 February | MoeMaKa Burmese News & Media
>unlucky 5000 notes
> ငါးထောင်တန် ငွေစက္ကူ သုံးစွဲရခြင်းကို လာဘ်မကောင်းဟု ယူဆနေကြမိုးမခ အထောက်တော်၊ ရန်ကုန်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၀ ယမန်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ပေါ်ထွက်လာသည့် ငါးထောင် ကျပ်တန် ငွေစက္ကူအား လာဘ်လာဘ...
>images after Chile earthquake
> ချီလီငလျင်အလွန် မြင်ကွင်းများဓာတ်ပုံသတင်းဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၀ ယမန်နေ့က လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ငလျင်ကြီးကြောင့် ဆူနာမီ လှိုင်းလုံးကြီးများ ဆိုက်ရောက်လာဖွယ်ရှိသည်ဟု တပ်လှန့်ထားသည့် ဂျပန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Shichigahama ဒေသမှ ဒေသခံများ ယနေ့ ပင်လယ်ကို...
>Sing Hip Hop?
> ငါ ဟစ်ပ်ဟော့ ဆိုရရင် ကောင်းမလားယောဟန်အောင်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၀ (ဒီကဗျာကို အသံထွက်ဖတ်ပါ။) ငါပြောချင်နေတာ တော်တော်များငါ ဟစ်ပ်ဟော့ဆိုရရင် ကောင်းမလားတွေး။ လူငယ်တွေကလည်း အချစ်အကြောင်းတွေချည်းပဲပြော…ငါကလည်း နည်းနည်း...
> ချီလီ နှင့် ဟေတီ ငလျင်ကြီး ၂ ခု နှိုင်းယှဉ်ချက်AP သတင်းဌာန ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၀ ငလျင်ဒဏ်ခံခဲ့ရသည့် ဒေသသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးသော ချီလီနိုင်ငံ အမျိုးသမီး သမ္မတနှင့် အရာရှိများ။ဟေတီနိုင်ငံ...
>Huge quake hits Chile; tsunami threatens Pacific
> ချီလီတွင် ငလျင်ကြီး လှုပ်ခတ်၊ ဆူနာမီရေလှိုင်းများ အာရှနိုင်ငံများသို့ ရိုက်ခတ်မည်ကို စိုးရိမ်ရမိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၆ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၀ ၀ါရှင်တန် အခြေစိုက် အမျိုးသား သမုဒ္ဒရာနှင့် လေထုအဖွဲ့ National Oceanic...
>Mar Mar Aye – 308
>ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ် အမှတ် ၃၀၈ သပိတ်မှောက်သီချင်းမာမာအေးဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂ဝ၁၀ရွှေတိဂုံရင်ပြင်ပေါ်ရှိ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားကျောက်စာတိုင်(photo: Danburg Murmur) သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစ ရှင်၊ မာအေး ချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ ဝါသနာရှင်တွေ အားလုံး...
>US lawmaker seeks to punish Myanmar on Suu Kyi
> ဒေါ်စုကို လွှတ်မပေးသည့် စစ်အစိုးရကို ဒဏ်ခတ်ရန် အမေရိကန် အမတ် ပြောဆိုAFP သတင်းဌာနဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၀ ယနေ့ ရန်ကုန်တွင် ထုတ်ဝေသည့် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသော တရားရုံးချုပ် စီရင်ချက် သတင်း...
>Quotes in Feb 2010
> မိုးမခ၏ ဖေဖော်ဝါရီ စာကိုး စကားကိုးဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၀ အမေရိကားမှာ ငယ်ငယ်နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ နေတုန်း ဆီပုံးထဲကို ကြွက်ဝင်ဖူးတယ်။ မသိလိုက်ဘူး။ ဆရာ နီကိုရဲ ရဲ့ ‘နှလုံးသားထဲ ကြွက်ဝင်နေသည်’...
>Maung Yit – Who is winning now for 2010 ?
> ကာတွန်းမောင်ရစ် – ၂၀၁၀ ကို ဒိုင်စားသွားမယ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၀
>Khet Mar – Poor Translator Poem
> ဘာသာပြန်ညံ့သူ ခက်မာ (ပန်းချီ – သန်းဌေးမောင်) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၀ မွေးနေ့ကျော်စတစ်ရက်အသက်လေးဆယ်အရွယ် ငယ်သူငယ်ချင်းနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာချက်(chat) ဖြစ်တော့“ငါတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ဘဝတွေကပျောက်ဆုံးခဲ့ရတာဟ” တဲ့သူငယ်ချင်းမက ဗြုန်းစားကြီးပြောတယ်။ ဒါဆို ဆယ်ကျော်သက်လွန်ဘဝတွေကရော ဆိုတော့“အဟက်- အဟက်-အဟက်”မြန်မာအသံထွက်ကို အင်္ဂလိပ်လို...
>Min Han – Jack London
> မြင်းစီးနေရသော လှေထိုးသား (သို့မဟုတ်) ဝံပုလွေကြီး၏ ဘဝနှင့်စာပေ….. မင်းဟန် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၀ ဒိဋ္ဌိကြီး၏ ဈာပန ‘တစ္ဆေ’ အမည်ရှိ သင်္ဘောသည် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၏ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် ရွက်လွှင့်၍နေသည်။ လေသည်...
>TheGeek – To Ko Zarganar – New Ideas for our 2010
> ကိုဇာဂနာ ဖတ်ဖို့ ဟာသ ၂၀၁၀ အကြံသစ် ဉာဏ်သစ်များ ပျော်တော်ဆက်သာဂိ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၀ ၂၀၁၀ အတွက် အစွမ်းကုန် ပြင်ဆင်နေကြချိန်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေက ထောင်ထဲမှာ ဘာတွေ...
>Over seven thousand Burmese registered to stay in Japan
> ဂျပန်နိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ၇ ထောင်ကျော် မှတ်ပုံတင်စာရင်းပေါက် မိုးသောက်ကြယ်သတင်းဌာနမှ ကူးယူဖော်ပြသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၀ မိမိတို့ရရှိထားသည့် နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာအမျိုးအစားအလိုက် နိုင်ငံခြားမှတ်ပုံတင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံနေရာအနှံ့တွင် နေထိုင်နေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၇,၇၈၉...
> အိမ်တွင်းလူနာရဲ့ နာတာရှည်ရောဂါ ဆောင်းယွန်းလ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၀ အချိန်တွေက တိုင်းရေးပြည်ရေး သတင်းကောင်းတပုဒ်လို ရှားရှား ပါးပါး မိသားစု ထမင်းလက်ဆုံစားရတယ်ကို မရှိဘူး … တယောက်က ကောင်းကင်ဘုံမှာ တယောက်က...
>Cartoon Saw Ngo – There’s no turn back to 2010 Election
> ကာတွန်းစောငို – ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အပြင်လူမ၀င်ရ၊ အတွင်းလူ မထွက်ရ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၀
>MoeMaKa and its Friends pay respect to U Win Pe as senior Burmese artist
> မိုးမခမီဒီယာနှင့် မိတ်ဆွေများ၏ သက်ကြီးစာပေပညာရှင် ဒါရိုက်တာဝင်းဖေကို ဂါရ၀ပြု မိုးမခ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃၊ အင်္ဂါနေ့က အမေရိကန်ပြည်၊ မေရီလန်းဒေသတွင် နေထိုင်သူ စာရေးဆရာ၊ ပန်းချီဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ...
>Aung Tha Nge’s poem
> အူသံရှည် နေ့စွဲများအောင်သာငယ်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၀ ညဉ့်က စိတ်ရူးပေါက်တဲ့ ခွေးတကောင်လို ဟောင်နေ…အနက်ရောင်တွေကို တထပ်ပြီး တထပ် ခေါ်လာနေ…သည်မှာတော့ ငါက ထိုင်ရုံလေး ထိုင်နေတာပါလေဇော်ကြီးရယ်…မင်းက မတ်တတ်ကြီး ဘာထိုင် လုပ်နေတဲာ…လမ်းလျှောက်ဦးလေ…ဒွတ်ခပါပဲကွာ…မင်းကို ငါ...
> ဖို့ဝိန်းမြို့ ဇေတ၀န်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအဆောက်အဦတိုးချဲ့ခြင်း မြို့တော်စည်းမျဉ်းနှင့် ညီညွတ်ရန်လိုဟု ဆို မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၀ ယခင်အပတ် ကြာသာပတေးနေ့က ဖို့ဝိန်းမြို့ရှိ မြန်မာမိသားစုများကိုးကွယ်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတခုဖြစ်သည့် ဇေတ၀န်ကျောင်း၏ ယာယီတိုးချဲ့ထားသော အဆောက်အဦအချို့ကို...
>Maung Swan Yi – Tin Moe and His Writings
> ကဗျာဆရာတင်မိုးရဲ့ စကားပြေ မောင်စွမ်းရည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၀ ကဗျာဆရာ တင်မိုးကွယ်လွန်တာ ၃ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ သူဟာ ကဗျာချည်းရေးလေ့ရှိပြီး စကားပြော အရေးနည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စကားပြေရေးပေးဖို့ တောင်ရင်လည်း စကားပြေရေးပေးပါတယ်။...
>Maung Thara – Comparing Rights …
> ‘လူ့အခွင့်အရေး နှိုင်းယှဉ်ချက် …’ မောင်သာရ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၀ ပြောရအုံးမယ်။ တနေ့ ရန်ကုန်မင်္ဂလာဒုံအလွန် စော်ဘွားကြီးကုန်းအတက်နား ကားလမ်းအကွေ့မှာ ကျုပ်တို့အဖွဲ့က ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတယ်။ ဇာတ်ကားနာမည်တော့ မပြောတော့ပါဘူး။ မတော် မီးခိုးကြွက်လျှောက်လိုက်ပြီး...